कता जाँदैछन अखिल र अखिल क्रान्तिकारी ? - Everest Dainik - News from Nepal
कता जाँदैछन अखिल र अखिल क्रान्तिकारी ?
२०७५, १२ माघ शनिबार
काठमाडाैं – पञ्चायतकालमा विद्यार्थी संगठन पार्टीभन्दा प्रभावकारी थिए । पार्टीको विचार प्रवाहमा पहिलो र प्रभावकारी सारथि थिए, विद्यार्थी संगठन । गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पनि पहिलो मोर्चामा उभिएर नारा घन्काउँदै सुरक्षाकर्मीको काँडेतार तोड्ने विद्यार्थी नै थिए ।
याे पनि पढ्नुस हारबाट अत्तालियो एमाले अखिल, चुनाव नभएका क्याम्पसमा पनि जितेको प्रचार
याे पनि पढ्नुस विश्वविद्यालयले मनोमानी शुल्क बृद्धि गरेको विराेधमा अखिल क्रान्तिकारी आन्दोलित